हामीलाई प्रेमको घोषणा
सुसमाचार - हामीलाई प्रेम परमेश्वरको घोषणा
धेरै इसाईहरू यसबारे निश्चित रूपमा चिन्तित हुँदैनन्, के परमेश्वरले तिनीहरूलाई अझै प्रेम गर्नुहुन्छ? उनीहरू चिन्तित छन् कि परमेश्वरले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोला, र त्योभन्दा पनि नराम्रो कुरा कि उहाँ तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाई उस्तै डर हुनुहुन्छ। तपाईं किन इसाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? यसको उत्तर केवल तिनीहरू आफैंमा इमानदार छन्। तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू पापीहरू हुन्। तिनीहरू आफ्ना असफलता, गल्तीहरू, असफलताहरू - आफ्ना पापहरूबारे पीडादायी रूपमा सचेत छन्। उनीहरूलाई सिकाइएको थियो कि परमेश्वरको प्रेम र मुक्तिसमेत उहाँ कति आज्ञाकारी हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यसोभए तिनीहरूले भगवानलाई माफी माग्दै बिन्ती गरिरहेछन् र क्षमाको लागि बिन्ती गर्दछन् कि यदि परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ र तिनीहरूको पीठ फर्काउनुहुन्न यदि तिनीहरूले कुनै गहिरो, भित्री चासोको भावना उत्पन्न गरे भने।
यसले मलाई हेम्लेट, एक शेक्सपियर खेलको सम्झना गराउँछ। यस कथामा, प्रिन्स ह्यामलेटले थाहा पाए कि उनका काका क्लाउडियसले ह्याम्लेटको बुबालाई मारे र उनको आमालाई सिंहासन लिन विवाह गरे। त्यसकारण, हेमलेट गोप्य रूपमा बदला माग्दै आफ्नो काका / सौतेला बुबालाई मार्ने योजनामा ​​छ। उत्तम अवसर आउँदछ, तर राजाले प्रार्थना गरिरहेका छन, त्यसैले हेमलेटले आक्रमण स्थगित गर्यो। यदि मैले उसको कबूलकोलागि उसलाई मार्नेछु भने, ऊ स्वर्गमा जानेछ, हेमलेटले सोच्छ। यदि मैले उनलाई फेरि पाप गरे पछि म त्यसलाई पर्खिएँ र मार्न सकें, तर उसलाई यो थाहा हुनु अघि नै उहाँ नरकमा जानुहुन्छ। धेरै मानिसहरू परमेश्वर र मानव पापको बारेमा ह्यामलेटको विचारहरू साझा गर्दछन्।
जब तिनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरूलाई भनिए कि यदि र जबसम्म तिनीहरूले पश्चात्ताप गरे र विश्वास गरेनन भने, तिनीहरू परमेश्वरबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन् र ख्रीष्टको रगतले उनीहरूका लागि काम गर्न सक्दैन। यस गल्तीमाथिको विश्वासले उनीहरूलाई अर्को गल्ती गर्न लगायो: जब तिनीहरू पापमा फर्किए, परमेश्वर उनीहरूको अनुग्रहबाट वञ्चित गर्नुहुनेछ र ख्रीष्टको रगतले उनीहरूलाई छोप्नेछैन। त्यसकारण, जब मानिसहरू आफ्नो पापीपनको बारेमा इमानदार छन्, उनीहरूले आफ्नो इसाई जीवनभर सोच्न कि परमेश्वरले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुभयो कि भनेर। यो कुनै पनि राम्रो समाचार होईन। तर सुसमाचार शुभ समाचार हो। सुसमाचारले हामीलाई भन्दैन कि हामी परमेश्वरबाट अलग भएका छौं र हामीले केहि गर्नुपर्दछ ताकि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ। सुसमाचारले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वर पिताको पितामा सबै थोक, तपाई र म सहित, सबै मानिसहरुमा (कलस्सी १: १ -1,19 -२०) मेलमिलाप भयो।
त्यहाँ कुनै बाधा छैन, मानिस र परमेश्वरबीच कुनै भिन्नता छैन, किनकि येशूले त्यसलाई भत्काउनुभयो र किनभने उहाँ आफ्नै शरीरमा मानवजातिलाई पिताको प्रेममा आकर्षित गर्नुहुन्छ (१ यूहन्ना २.१; यूहन्ना १२..1२) केवल अवरोध एक काल्पनिक हो (कलस्सी १:२१) कि हामी मानवहरू आफ्नै स्वार्थ, भय र स्वतन्त्रताको माध्यमबाट निर्माण भएका छौं। सुसमाचार कुनै कुरा गरेको वा विश्वास गर्ने कुराको कुरा होइन जसको कारण भगवानले हाम्रो स्थितिलाई प्रेम गर्न नचाहिनेलाई परिवर्तन गर्न लगाउँछ।
हामीले गर्ने वा नगर्ने कुरामा परमेश्वरको प्रेम निर्भर हुँदैन। सुसमाचार भनेको पहिले नै सत्य के हो भन्ने कुराको व्याख्या हो - पिताको सम्पूर्ण मानवजातिप्रति अपार प्रेमको व्याख्या, जुन पवित्र आत्माद्वारा येशू ख्रीष्टमा प्रकट भएको थियो। तपाईंले कुनै पछुतो वा विश्वास गर्नुभन्दा अघि भगवान्‌ले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, र तपाई वा अरू कसैले गर्नुहुने केही परिवर्तन हुँदैन (रोमी 5,8.२8,31; 39.१)
येशू बाहेक अरू कोही छैन, हाम्रो मुक्तिदाता, जसले हाम्रा सबै पापहरु लिनुभयो, जो पवित्र आत्माद्वारा हामीमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्नलाई काम गर्नुहुन्छ। (फिलिप्पी :4,13:१:2,8; एफिसी २: -10-१०) हामी आफैले उहाँलाई पछ्याउन तनमनले दिन सक्छौं, यदि हामी असफल भयौं भने उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुनेछ भनेर जानेर। यसकाे बारेमा साेच! परमेश्वर कुनै ईश्वर हुनुहुन्न जसले हामीलाई स्वर्गमा धेरै टाढा हेर्नुहुन्छ, तर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, जसमा तपाईं र सबै जना बाँच्नुहुन्छ, र हुनुहुन्छ (प्रेरित १:)) तपाईं को हुनुहुन्छ वा तपाईंले जे गर्नुभयो त्यसका आधारमा उसले तपाईलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्छ कि, मानव पुत्रमा ख्रीष्टको पुत्र, जो मानव शरीरमा आउनुभयो, र हाम्रो शरीरमा पवित्र आत्माको माध्यमबाट आउनुभयो - तपाईको एक्लोपना, डर, तपाईका पापहरू लगियो, र तपाईको अनुग्रहले तपाईलाई निको पार्नुभयो। उसले तपाई र उसको बिचमा भएको हरेक अवरोध हटायो।